तालीको इतिवृत्त- साहित्य/विविध - कान्तिपुर समाचार
आश्विन ३, २०७७ शैलेन्द्र साकार
विश्व सिग्देलको नयाँ कविता–किताब ‘तालीको समाजशास्त्र’ शालीन विद्रोहका रूपमा प्रस्तुत भएको छ । प्रथम कविता ‘सार्वजनिक शौचालय’ लाई संसद्सँग दाँज्ने साहस गर्ने सिग्देल नयाँ विम्ब सृष्टि गर्छन्— अघिल्लो दिनजस्तै आज पनि तिमी बुद्ध बनेर निस्कने छौ— संसद्भवनबाट ।
जीवनको विसङ्गति, सृष्टिको नियति र मान्छेको बाध्यताको अनुभूतिले कवि विश्वका कविता उज्यालिएका छन् । यस अर्थमा उनी नितान्त नयाँ पुस्ताका सशक्त र प्रतिनिधि कविका रूपमा
आफ्नो परिचय दिन्छन् । जीवनसित प्रश्न गरिरहेको चेत छ–कवितामा ।
कैयौं समालोचक कविलाई अदृश्यका दृश्य प्रतिविम्ब मान्छन् । उनी पनि अपवाद छैनन् । समाजले नदेखेको तालीको समाजशास्त्रको इतिवृत्त खोज्छन् । निष्कर्ष छ— अन्धो हुन्छ ताली, अन्धो हुन्छ सत्ता ∕ संसारका सम्पूर्ण चर्चित दर्शनहरू पोलिमर नोटमा रूपान्तरित हुन्छन् कि भन्ने चिन्ता छ कविमा । प्रस्ट भन्छन्–
हामीहरू मार्क्स हौं
वा, हौं माओ
बुद्ध हौं वा हौं ताओ
दर्शनलाई रू. दसको पोलिमर नोट हुनबाट जोगाऔं
‘दर्शनलाई उपभोग्य सामग्री नबनाऔं’ भन्छन् कवि । खासमा यो विश्वव्यापी चिन्ता हो । कवि ईश्वर होइन, स्वर्गबाट आगो चोरेर मानिसको चुल्होमा ल्याइदिने प्रमिथस पनि होइन । कवि त तमाम चुनौती स्विकारेर अघि बढ्ने कलाकार हो । साँचो लेख्ने, बोल्ने जागरुक सामाजिक प्राणी हो । असत्यविरुद्ध उभिएको सशक्त शब्द सामर्थ्य हो । यी दायित्व स्विकार्ने कवि यो कविता–किताबमा तिनै जिम्मेवारीसाथ उभिएका छन् ।
कवि विश्व सिग्देलका कविता पढ्दा लाग्छ— उनी संसारबाट विचलित छन् । संसारको सन्ताप, अन्याय, विसंगति र विद्रूप स्थितिबाट आक्रान्त छन् । र, मानवीय पीडालाई कविताको आवाज दिन सधैं तत्पर छन् ।
कविको वक्तव्य भनेकै कविता हो । कवितामा कविको दिल र दिमाग दुवै बोल्नुपर्छ । ‘कवि गाउँ कहिले आउँछौ ?’ कविताले मलाई निकै सोचमग्न बनायो । हामी कविता लेखेर जो सहरमा बसिरहेका छौं, साँच्चै कहिले गाउँ जान्छौं ? कहिले आफ्नो जन्मभूमि जान्छौं, जहाँ बेल विवाहपूर्व मरेकी किसोरीको लास गाडिएको छ । यो निकै संवेदनशील विषय हो ।
‘टाँस्न मन लाग्छ सडक’, ‘कैंचीको मुट’, ‘सपनाहीन कपाल काट्ने ठाकुर’, ‘लोकतन्त्रको गर्धन’ जस्ता विपर्यासबोधी वाक्यांशले सिग्देलका कविताले उचाइ प्राप्त गरेका छन् । विभिन्न रङमा खेल्न चाहेका छन्– कवि । दुःखहरूको रङ, दुवाली थुन्दा छोराका आँखाको रङ, पेटको आगो बलिरहेको रङ, रङ उडेको पर्दाको रङ र सम्पूर्ण अस्थायी रङहरू पोतेर उनी कवितामा उभिएका छन् ।
आजका प्रश्नहरूभित्र कविले आँखा खोलेका छन् र जिब्रो बेचेर स्वाद किन्ने संस्कारको विरोधमा दह्रोसँग उभिएका छन् । कवि बारुदभन्दा संवेदनशील आजको समयमा उभिएका छन् र पैताला बेचेर विश्वभ्रमण गर्ने सपना देख्दैनन् । अन्त्यमा ‘नाङ्गो साबुन’ कविताका यी पङ्क्ति उद्धृत गर्ने लोभ संवरण गर्न सकिनँ –
हात बेचेर तिमीलाई
चम्चा किन भन्छ अखबार
जिब्रो बेचेर, स्वाद किन भन्छ टेलिभिजन
विश्व भ्रमणको भ्रमणको निम्तो किन भन्छ रेडियो ।
प्रकाशित : आश्विन ३, २०७७ ११:३४